Maalgelinta Miisaaniyadeed ee Dalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Anders Borg oo soo ban-dhigay miisaaniyadda xilliga dayrta.
Maalgelinta Miisaaniyadeed ee Dalka
La daabacay tisdag 20 september 2011 kl 11.32
Miisaaniyadda sannadka foodda innagu soo haysa ee 2012 ayaa looga gol leeyahay sidii loo wejihi lahaa welwelka dhaqaale ee caalamka ka taagan iyo dib u habeeynta mustaqbalka fog howlo ay ka mid yihiin habka iskuulladu.
Suuqa shaqada ayaa loo qoondeeyay 8,1 milyaard oo koron inta u dhaxeeysa sannadaha 2012-2014, sidii looga hor-tegi lahaa dhaqaalaha hooseeya, iyadoo xafiiska xiriirka shaqaduna heli doono dhaqaale dheeriya ee gaarsiisan 1,2 milyaard.
Maal-gelinta la hadal-hayo waxaa ka mid ah midda dhimista cashuurta dadban ee maqaayadaha iyo adeegyada. Maal-gelintan ayaa khasnadda dawladda dhimi doonta 5,4 milyaard oo koron, kana mid ah 15-ka milyaard ee dawladdu miisaaniyaddeeda ku qoondeeysay.
Inkasta oo shaki ballaaran ka jiro ayaa haddana goolka laga leeyahay uu yahay sicirka oo hoos u dhaca iyo abuurka goobo shaqo ee dhallinyarta.
Maal-gelinta iskuullada ayaa sidoo kale ku wajahan mustaqbalka dheer iyadoona iminka xoogga la saaray tayada macallimiinta. Mushaarooyinka oo kor loogu qaado iyo suurtagal taageero dhaqaale degmooyinka u suurtageliya macallimiinta hor-u-mar shaqo ayaa ka mid ah. Maalgelin ballaaran sidii kor loogu qaadi lahaa tayada macallimiinta dhigta maadada xisaabta ee dugsiyada hoose/dhexe bilaabanna doonna sannadka 2013, 1,3 milyaard ee koron oo loo qoondeeyay kor uqaadidda tayada bareyaasha inta lagu jiro sannadaha 2012-2015.
Xaaladda dhaqaale ee liidata aawadeed ayay dawladdu qorshaheeda uga saartay dhimis markii shanaad qidmadda shaqaalaha. Sidoo kale waxaan iyaguna qidmadda aan laga dhimayn dadyowga da'da howl-gabka, iyadoona dib loogu dhigay sannadaha 2013 ama 2014. Waayeelka dhaqaalahoodu liito ayaa loo kordhiyay 170 koron dhaqaalihii kirada loogu kaabi jiray. Sidoo kale dhallinyarada iyo qoysaska dhaqaalahoodu liito ayaa la filayaa in laga taageero kirada guryaha ey ku bixiyaan.
Dhimista shanaad ee qidmadda shaqaalaha ayaa iyadana dib looga hir-gelin doonaa kolka dhaqaalaha dalku dheeli-tirmo ama ay suurtagal noqoto iyo sidaasi si la mid ah kor u qaadidda heerka bixinta qidmadda dawladda ee mushaarrada .
Wasiirrada dhaqaalaha ayey howlahoodu ka mid yihiin isku-dheeli-tirka cashuurta khamriga iyo tubaakada. Waxaana kor loo qaadi doona qiyaastii laba koron qiimaha sigaarka iyo tubaakada, halka kolkan laga gaabsaday in kor loo qaado qiimaha khamriga.
Vården får 500 miljoner kronor extra nästa år för att förstärka rehabiliteringinsatser och 400 miljoner läggs på att förbättre situationer för så kallade nollklassade i sjukförsäkringen.
Hayadaha caafimaadka ayaa sannadka foodda innagu soo haya miisaaniyaddooda lagu kordhiyay 500 malyan, halka 400 oo malyuun la raaciyay sidii loo hagaajin lahaa xaaladda dadyowga ka dhacay caymiska xannuunka.
Waxaa sidoo kale kor loo qaaday 200 oo koron, lana gaarsiiyay 1100 kaarka ruuxa u fasaxaya inaannu daryeelka caafimaad kharash kaga bixin wixii intaa ka dambeeya iyo kaarka daawada bilaashka ee la gaarsiiyay 2200 oo koron, lagana qaaday 1800 oo koron.